ဆိုရေးရှိက ဆိုရလိမ့်မယ် ~ Nge Naing
Sunday, March 27, 2011 Nge Naing7comments
ကျန်းမာရေးရှုဒေါင့်ကနေ Physical, Psycho-social ဘယ်ဘက်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် လုံးဝ Safety နဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတာကို ကျောင်းတွေမှာ (Sexual Education) မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတုခိုးမှားပြီး လိုက်လုပ်သူတွေ ရှိနေမှာကို လွန်စွာ စိုးရိမ်ပူပန်မိလို့ ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်တခုကို ညွှန်းရင်း ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ဘလော့ဂ်အစုံဖတ်သူ ဖြစ်လို့ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကိုလည်း ဘလော့ဂါမျိုးစုံ ရောက်တယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ သံဃာတော် စာဖတ်သူတွေနဲ့ သံဃာတော် ဘလော့ဂါတွေအတွက်ကျတော့ ဒီပို့စ်က သိစရာလည်းမလို ဖတ်ဖို့လည်း မသင့်လျော်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ပို့စ်အသစ် တင်ထားတာ တွေ့လို့ ၀င်လာမိတဲ့ သံဃာတော်တွေရှိရင် ဒီပို့စ်ကို လုံးဝမဖတ်ဘဲ လှည့်ပြန်ဖို့ ပထမဦးစွာ လျှောက်ထားပါရစေ ဘုရား။ တခြား လူစာဖတ်သူများကိုတော့ ကျွန်မ ညွန်းပေးလိုတဲ့ မူလ ပို့စ်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ဖတ်ပါလို့ ပြောထားပေမဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ ကတော့ အသက်အရွယ်ကို မသတ်မှတ်လိုပါဘူး။ အင်တာနက်သုံးနေသူ Secondary School က (အသက် ၁၅/၁၆ နှစ်နှင့် အထက်) အဆင့် ကျောင်းသားအရွယ်ကနေ လူကြီးတွေအထိ အသက်အရွယ်မရွေး မည်သူမဆို ဖတ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ Physiotherapist, Occupational therapist, Health Care Social Worker (or) Consultants စတဲ့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေထဲက ရောက်လာရင်လည်း ကျွန်မဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးသင့်တာကို ဆွေးနွေးပြီးမှ ပြန်ကြဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။
အခုတော့ C-Box မှာသာမက ဒီ Site တွေကို ကျွန်မ ဘလော့ဂ် အတုမှာလည်း တင်ထားတယ်။ ဘလော့ဂ် C-Box ကို ဘုရားခုနှစ်ဆူ သီချင်း အစိန္တေယျ ဘုရားရှိခိုးသီချင်းနဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ဘုရားရှိခိုးသီချင်း နှစ်ပုဒ်အကြား ညှပ်ထားပြီး အနောက်ပို့ထားတာတောင်မှ စစ်ခွေးတွေက C-Box ထဲမှာ တနေ့ကို အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ယုတ်ရိုင်းတာတွေဆဲတာနဲ့အတူ ဒီဆိုက်တွေကို လာတင်နေတော့ ဒီပို့စ်ကို ထပ်တင်ရတဲ့အကြောင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မလည်း မလေ့လာဖူးလို့ Occupational Health & Safety Policy ဘယ်လို ရှိပြီး ပြည့်တန်ဆာတွေကို ရေရှည် Side affect မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ထားတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ အတိအကျ မသိပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ အတွင်းအပြင် အကုန်လုံးကို စိတ်ချရတဲ့ ဆေးရည်တွေနဲ့ စနစ်တကျ သန့်စင်ထားပြီး ဘယ်နှစ်မိနှစ်အတွင်း ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ရောဂါ မပြန့်နိုင်တဲ့ ဆေးရည်တွေနဲ့ ကာကွယ်မှု လုပ်ထားမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ဒီလိုနေထိုင်တာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ပြည့်တန်ဆာ မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ အပြင်မှာ ဒီလိုနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်ကို အန္တရယ်များလှကြောင်းကို မကောင်းတာကို အဟုတ် မထင်ဖို့ အသိပေးချင်ပါတယ်။ (27/3/11 ဖြည့်စွက်ချက် Nge Naing)
အမျိုးသမီး တယေက်အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မ မတင်ချင်တဲ့တာ အမှန်ပါ ဒါကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကအနေ ဒီနှစ်အထိ တအုံနွေးနွေးနဲ့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ကာ မတင်ဖြစ်ဘဲ ရှိနေရာကနေ နောက်ဆုံးတော့ ဆိုရေးရှိက ဆိုရလိမ့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ညွှန်းလိုတဲ့ ပို့စ်က ဆရာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ရေးတဲ့ပို့စ် ဖြစ်ပြီး ဒီပို့စ်ထဲမှာ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့် ရရှိတဲ့ အကျိုးအပြစ်အပြင် Reproductive Organ တွေနဲ့ စအိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပါ နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Sexual Health နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာဗဟုသုတမှ မရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မကိုယ်တိုင် မရေးနိုင်ဘဲ နားလည်တဲ့ သူရေးထားတာကို ပြန်ညွန်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့စ်ကို ဒီနေရာမှာ သွားးဖတ်နိုင်ပါတယ်။
22/2/10 က တင်တဲ့ မူရင်းပို့စ်ကို လက်တွေ့နဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ အပေါ်မှာ အပြာရောင်စာပိုဒ်တပိုဒ် ထပ်ဖြည့်ပြီး ပြန်လည် ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: ကျန်းမာရေး/ဇီဝသိပ္ပံ,ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
March 28, 2011 at 2:05 AM Reply
မငယ်နိုင် စာ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
ညွန်းထားတဲ့လင့်ခ် လဲ သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
သမီးလဲ အစကတော့ အံ့သြတယ် ဒီ anus ဆိုတဲ့ function ကို သိထားတယ်ဆိုတော့လဲ လေ ...
အဲဒါကို anual sexual လို့ခေါ်တယ်တဲ့ သမီးထင်တာ အဲဒါ ကျား-ကျား ချင်းမှာပဲရှိတယ်ပေါ့ ကျား-မ မှာမရှိဘူးလို့ ထင်တာ
အဲဒီ sexual ဖက်မှာ အတွေ့ကြုံရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးဖူးတော့ သူငယ်ချင်းက ရှင်းပြတယ် မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါ vigana (စာလုံးပေါင်း သည်းခံပါ) က ကြာတော့ လျော့လျဲလာတယ်တဲ့ အရင်ကလို sex လုပ်ရတာ မကောင်းတော့ဘူးတဲ့ ခပ်ကျပ်ကျပ်(ဆော်ရီးနော်) ဖြစ်မနေတော့ဘူး တဲ့ ဒါကြောင့်မို့ anual sex ကို သုံးတာတဲ့ အဲဒီ anus က အရည်လဲ မထွက်ဘူး sex လုပ်ရတာလဲ ကျပ်ကျပ်တင်းတင်းပဲ တဲ့ ဒါကြောင့်မို့ သုံးတာလို့ ရှင်းပြဖူးတယ် ဒါပေမယ့် anual sex မလုပ်ခင် ဝမ်းချူထားရသင့် ဝမ်းချူထားရမယ် လို့တော့ ပြောတယ် မဟုတ်ရင် နံလို့
March 28, 2011 at 4:27 AM Reply
Schoolchildren given sex lessons... in what's available at the local brothel
Psychological Rape as "Sex Education"
5,200 Pentagon employees purchased child pron
March 28, 2011 at 10:49 AM Reply
ကျနော်အကြံပြုချင်တာ ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကွန်ယက်တွေဖွဲ့ပြီး စိတ်ထားသူတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ ဆုံးမထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော့အမြင်ကတော့ အဲဒီ ကွန်ယက်စံနစ်ဟာ လက်တွေ့ကျပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လူတွေက ဒီမိုကရေစီမရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောရင်လဲ လက်ခုတ်တီးပြီး အားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တဲ့သူ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားအားယားယား ပါးစပ်က အမေလို့ ခေါ်နေတဲ့ ကောင်တွေလဲ လက်တွေ့ကျတော့ ဘာမှမလုပ်ကြဘူးဗျ။ တော်တော်ကို အသုံးမကျတဲ့ မြန်မာတွေပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော့လိုပဲ အသုံးမကျတဲ့ လူငယ်တွေကို ဆုံးမသြ၀ါဒပေးစေချင်ပါတယ်။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ ကချင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ ဗမာ ၊ ပအို့၊ ရှမ်း၊ ပလောင် ၊ ပဒေါင် ၊ ကရင် စသည့်တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါသည်)
ကျနော် မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက လူငယ်တွေကို . . . ဘာတွေလုပ်ကြကွာ. . . ဘယ်လို လုပ်ကြကွာ. . . စသဖြင့် အကျိုးရှိတာတွေကိုပဲ ပြောဆို . . . . ဆုံးမပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာပြည်ကြီး သာယာပါစေ။
March 28, 2011 at 1:24 PM Reply
Clinton Raped Broaddrick Twice.
President Bush accused of rape, why have you not heard about this?
Woman filed rape charge against Pres Bush last year now found dead
Show Porn Videos To Kids in schools
March 31, 2011 at 10:30 AM Reply
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မူ.. စဉ်းစားစရာနော်
oက်ဝံလေး .. ကွန်မန့်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဖတ်ကောင်းလို့ အကြိမ် ဖတ်နေမိတယ်
"ဒီစီဘောက်မှာ အမြင်မတူသူတွေကို ဘန်းတယ် ပီးရင် ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး စွပ်စွဲတယ်" ဆိုပြီး သူခိုးက လူပြန်ဟစ်သလို ၇ု၇ှေ၇ာက် စစ်ခွေး အယုတ်တမာကောင် တုတ်ကြီးက လူကို ပြန်ဟစ်နေပါလား
ဟိတ်ကောင် စစ်ခွေး တုတ်ကြီး .....
မင်းေ၇းတဲ့ စာတွေကို မင်းအမေ၇ယ်.. မင်းအဒေါ်တွေ၇ယ်.. မင်းအမတွေ၇ယ်.. မင်းညီမတွေ၇ယ်ကို အ၇င် ဖတ်ခိုင်းလေ
April 19, 2011 at 10:37 PM Reply
မင်းေ၇းတဲ့ ဖ၇ုသဝါစာ တွေကို မင်းအမေ၇ယ်.. မင်းအဒေါ်တွေ၇ယ်.. မင်းအမတွေ၇ယ်.. မင်းညီမတွေ၇ယ်ကို အ၇င် ဖတ်ခိုင်းလေ